CITY GYM FITNESS ACADEMY, ရန်ကုန် — အဖွင့်နာရီ, လိပ်စာ, ဖုန်းကို
CITY GYM FITNESS ACADEMY, ရန်ကုန်	လိပ်စာ, ဖုန်းကို, အဖွင့်နာရီ, လမ်းညွန် နှင့် တည်နေရာ
01 709 999
CITY GYM FITNESS ACADEMY, အဖွင့်နာရီ
တနင်္လာနေ့ ယနေ့တွင် 06:30 — 21:00
အင်္ဂါနေ့ 06:30 — 21:00
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 06:30 — 21:00
ကြာသပတေးနေ့ 06:30 — 21:00
သောကြာနေ့ 06:30 — 21:00
စနေနေ့ 06:30 — 21:00
တနင်္ဂနွေ 06:30 — 21:00
KTR Tennis Club	849 မီတာ။ Senso	1.14 ကီလိုမီတာ Power House Fitness Club	1.22 ကီလိုမီတာ Binko Gym	1.35 ကီလိုမီတာ Billboard	1.4 ကီလိုမီတာ Balance fitness 2	1.52 ကီလိုမီတာ ရန်ကုန်ယောဂအိမ်	1.61 ကီလိုမီတာ ရန်ကုန်စကွပ်ကလပ်	1.69 ကီလိုမီတာ FitProGym	1.74 ကီလိုမီတာ Nataraja	1.8 ကီလိုမီတာ
ပဲခူးမြို့	65.08 ကီလိုမီတာ ဟင်္သာတ	118.79 ကီလိုမီတာ သထုံ	129.41 ကီလိုမီတာ ပုသိမ်	151.14 ကီလိုမီတာ မော်လမြိုင်	163.63 ကီလိုမီတာ တောင်ငူ	237.88 ကီလိုမီတာ ပြည်	244.13 ကီလိုမီတာ ထားဝယ်	375.13 ကီလိုမီတာ ရေနံချောင်း	426.42 ကီလိုမီတာ Meiktila	452.52 ကီလိုမီတာ
CITY GYM FITNESS ACADEMY မှာတည်ရှိပါတယ် — ရန်ကုန်, မြန်မာ.
ယခု ကုမ္ပဏီရဲ့ကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ပွင့်လင်းသည် 21:00.
ကျနော်တို့ဖုန်းဖြင့်ပိတ်ပွဲနှင့်ပြတ်တောက်, ကြိမ်ဖွင့်လှစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်အကြံပြုပါသည် — 01 709 999.